MAKA Cessna Citation Excel XLS FSX & P3D - Rikoooo
downloads 16 679
Aryus Works, Alex Sandro Guedes Silva, Jeffrey S. Bryner, Sound site Christoffer Petersen, converted site Bigmike
Ebe a bụ Cessna tikeeti Excel XLS + n'ihi na ndị ọhụrụ simulators, ụlọ na n'ime ime-n'ụzọ zuru ezu 3D, VC na-ada site na Lear45. Tikeeti mbak pụrụ iche livery. Akpan akpan e lebara anya na nsiridi na zuru ezu.
The Cessna tikeeti Excel bụ a turbofan azụmahịa ugboelu wuru Cessna Aircraft Company na Wichita, USA. Excel ka ghọrọ usoro na tikeeti XLS na XLS + Quote. nlereanya bụ a azụmahịa ihe ịga nke ọma n'ihi na Cessna rere 700 Family ụgbọ elu ke 10 afọ (Wikipedia)
Onye edemede: Aryus Works, Alex Sandro Guedes Silva, Jeffrey S. Bryner, nke ụda Kraịstoffer Petersen, nke Bigmike gbanweere